सन् २०१८ मा भएका विश्वकै चर्चित बाह्र घटना,के के भए ? « News24 : Premium News Channel
सन् २०१८ मा भएका विश्वकै चर्चित बाह्र घटना,के के भए ?
काठमाण्डौ।वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु पनि विश्वव्यापी भए । वर्षभरीका चर्चित मुख्य घटनाक्रमहरुको सूचीमा राजनीतिक घटनाहरु नै धेरै भएका छन् । त्यस बाहेक हिंसात्मक, आपराधिक तथा अन्य विभिन्न घटनाहरु पनि चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन् । यस बर्षका मुख्य केही घटनाहरुको यहाँ संक्षेपमा स्मरण गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिका रुपमा अपेक्षित भन्दा पनि अनपेक्षित भूिमकाहरु धेरै देखाउनुभयो । सञ्चार माध्यमहरु, आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई पनि पूर्ण विश्वास कहिल्यै गर्नुभएन । उहाँले यो अवधिमा झण्डै डेढ दर्जन मन्त्री तथा मुख्य कर्मचारीहरुलाई बर्खास्त गर्नुभयो भने अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धमा पनि विश्वास बढाउन सक्नु भएन ।
उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँगको वार्ता बाहेक उहाँको प्रशंसायोग्य भूमिका कमै भएको अधिकांशको ठम्याई छ । पछिल्लो समयमा केही ठाउँमा भएको निर्वाचनको नतिजा र मेक्सिको पर्खालको बजेट पारित नभएपछि कर्मचारी तलबबिहिन भएका घटनाले धक्का दिएको छ ।
युरोपेली संघसँग बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायतले त्यसको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन निकै मेहेनत गर्नु परेको छ । प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा धेरै ध्यान दिन भ्याउनु भएको छैन भने ब्रेक्जिट मामिलामा दुई जना विदेश मन्त्रीसहित अन्य केही मन्त्री र वरिष्ठ अधिकारीहरुले समेत उहाँलाई साथ दिएनन् ।
लामो समयदेखि एक अर्कालाई प्रमुख दुश्मन मान्ने उत्तर कोरिया र अमेरिकाको सम्बन्धमा सन् २०१८ मा नाटकीय परिवर्तन भयो । एक अर्कालाई सिध्याउने चेतावनी दिएको केही महिनामै ती देशका नेताहरुले गत जुन १२ का दिन सिङ्गापुरमा भएको शिखर सम्मेलनको क्रममा एकअर्कालाई अङ्गालो हालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विश्व समूदाय नै अचम्भित भएको छ । यो सम्भव बनाउने मुख्य श्रेय भने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनलाई जान्छ ।
बाहलवाला प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उहाँको दुवै निर्णय अवैध भएको भन्दै अदालत र संसदले खारेज गरिदिएपछि अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । अवैध कदम अहिलेको संसारमा टिक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिनेगरी टुङ्गिएको यो घटना यस वर्ष दक्षिण एसियामा चर्चामा रह्यो ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन, मि–टु अभियान, अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान आदिमा जारी द्वन्द्व, पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई छोरीसहित जेलमा राखिएको छ भने विश्वविश्यात क्रिकेट खेलाडी इमरान खानले सत्तारोहण गर्नुभएको छ ।
मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले ९२ बर्षको उमेरमा फेरि देशको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक भ्रष्टाचारको आरोपमा काराबासमा हुनुहुन्छ । बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई चौथो पटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा उहाँकी चिरप्रतिद्वन्द्वी खालिदा जियाले ७३ बर्षको उमेरमा अस्वस्थ अवस्थामा जेलभित्रै छटपटारहनु परेको छ । यस्तै उतारचढाबका बीच बर्ष २०१८ को विदाई र नयाँ बर्ष २०१९ को स्वागत गरिएको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि नयाँ बर्षलाई स्वागत, सबैलाई शुभकामना ।